Bulshada BA NA ee 54 kooxaha qowmiyadeed ee Fiyatnaam - Qudduuska Land ee Daraasaadka Vietnam
BA NA waxaa ku nool dad ka badan 90,259 degane oo loo yaqaan koox hoosaadyo kala duwan Si aad u-eeg, Gio-lang (Y-lang), Garacad ee Ngao, Krem, Roh, Kon Kde, Alacong, Kpangcong iyo Bo-nam. Way degeen Kon Tum1 Gobolka iyo qaybaha reer galbeedka ee Binh Dinh2 iyo Phu Yen3 Degmooyinka. Luuqadda BA NA waxaa iska leh Isniin-Khmer qoyska luqadda.
BA-NA waxay badiyaa ku nooshahay soosaarida bakeeriga iyo bumiska ee bariiska, cuntada kaabayaasha ah, khudradda, miraha, sonkorta iyo suufka. Maalmahan, qaar ka mid ah bulshada BA NA ayaa sidoo kale beero kafee iyo dalagyo kale oo warshadeed. Marka laga reebo beeraha, BA NA gadaal lo'da, digaagga, doofaarka iyo riyaha. Ku dhawaad ​​tuulooyinka oo dhan waxay leeyihiin ilo. Degmooyinka qaarkood, BA NA waxay sameyn karaan matoorro fudud. Haweenku waxay ku duudduubaan dharka si ay u sameeyaan labbiska qoyskooda halka ragga ay sameeyaan dambiilo iyo shabaggii. Waqtiyadi hore, waxay ku dhaqmi jireen alaabada ay ku iibin jireen alaabada sida cowska, faasaska, dambiilaha doolshaha, doofaarka, dheriyada naxaasida, dhalooyinka, gongsyada iyo digaagga.
BA-NA waxay ku nool yihiin guryo dabaqyo ah. Waagii hore, guryaha dhaadheer waxay caan ku ahaayeen kuna habboon yihiin qoysaska sii fida. Hadda qoysaska BA NA waxay u muuqdaan inay ku nool yihiin guryo yaryar. Tuulo kasta, waxaa ku yaal guri la wadaago oo la yiraahdo safka taas oo u taagan dhererkeeda iyo quruxdeeda, waa xarunta tuulada halkaasoo lagu abaabulo shirarka odayaasha iyo dadka tuulada, lagu sameeyo cibaadooyin, iyo martida oo lagu soo dhoweeyo. Tani sidoo kale waa goob ay ku seexdaan ragga dhalinyarada ah ee aan guursan habeenkii.
Marka loo eego caadada guurka, ragga iyo haweenka BA-NA waxay ku raaxaystaan ​​xorriyadda xulashada lammaanahooda nolosha. Guurka waxaa lagu sameeyaa dhaqanno dhaqameed. Lammaanaha da'da yar waxay ku wada nool yihiin labada waalidba qoysaskooda iyadoo ay u dhexeyso labada qoys. Kadib dhalashada cunugga koowaad, waxaa loo oggol yahay inay dhisaan qoyskooda nukliyeerka. Caruurta marwalba waxaa loola dhaqmaa si naxariis iyo tixgelin leh. Dadka tuulada la deggan weligood lama siiyo magacyo isku mid ah. Haddii ay dhacdo in shakhsiyaad isku magacyo ah ay la kulmaan midba midka kale, waxay qaban doonaan xaflad loogu talagalay walaaleyn iyo qeexidda kala sarraynta iyadoo loo eegayo da'da.
Carruurta BA NA waxay leeyihiin xuquuq dhaxal oo isku mid ah. Dhammaan xubnaha qoyska waxay ku wada nool yihiin sinnaan iyo wada noolaansho midba midka kale ka mid ah.
BA-NA waxay xurmeysaa jinniyada la xiriira aadanaha. Midkasta wuxuu leeyahay magaca saxda ah ee raacaya magacyada la yiraahdo bood (Mr.) ama da (Marwo.). Fikradahooda, qofka dhintay wuxuu isu rogaa nafta, marka hore naftu waxay ku sii jirtaa qabuuraha tuulada, ka dib waxay u timaadaa dhulkii awoowayaasha ka dib "qabriga oo laga tagayo”Dhaqan. Cibaadadani waa sagootintii ugu dambeysay ee loo sameeyo marxuumka.
BA NA waxay leeyihiin hanti hodan ku ah suugaanta iyo farshaxanka oo ay kujiraan folksongs iyo qoob ka ciyaarka xafladaha iyo cibaado diimeed.
Qalabka muusikada ayaa la kala duwan yahay, sida noocyo gongs oo isku jira oo kala duwan, t'rung xylophone, Bro, klong saaray, Ko-NL, khinh khung goong xargaha xargaha iyo ma-ahaado, welwel iyo to-tumid buunka. Dareenka bilicda asalka ah ee BA NA waxaa lagu muujiyey muuqaalkooda qurxinta ee alwaax ku xardhan ee guryaha la wadaago iyo guryaha xabaasha.
Bandhigga BaNa'cong chieng ee Kontum (Xigasho: Thong Tan Xa Vietnam)
Nooca Fiyatnaamiis (vi-VersiGoo): Nguoi BA NA trong Cong dong 54 Dan toc anh em o Vietnam Nam.
* : Macluumaadka dadweynaha ee maqaalkan waxaa lagu cusboonaysiiyey iyadoo la raacayo tirakoobka Julaay 1, 2003 ee Guddiga Vietnam ee dadka laga tirada badan yahay.
(Booqday jeer 625, booqashooyinka 1 maanta)
Views Views: 2,201
← BULSHADA 54 GUUD GUUD EE VIETNAM - Qaybta 1aad
Kooxaha Qowmiyadeed ee Fiyatnaam - Horudhac →
LUQADA VIETNAMESE ee Fiyatnaamiis iyo Shisheeye… (4,510)
Booqashada Maanta: 228
Booqashooyinka Maalmihii 7 ee ugu dambeeyay: 3,149
Guud ahaan Wadarta: 286,044